Bhegi Machine, Mask Machine, Shoe Kavhara Machine - Fangyong
High Speed ​​Automatic kuraswa Mask Kuita Mac ...
TPE Glove Kugadzira Machine
XT350 Shoe Cover Kugadzira Machine
Double Line Coreless Marara Bhegi Kugadzira Machine
YM480 Shower Cap Kugadzira Machine
DFR380 Double Line T-shati Bhegi Kugadzira Muchina
Ruva Bhegi Kugadzira Machine
Jira bhegi kugadzira muchina
CLFQ1300 Pamusoro Pokutenderera Slitting Machine
GSFQ1300A Otomatiki Yekumhanyisa Slitting Machine
WF1600 Non dzakarukwa slitting muchina
Otomatiki Imbwa Poop Bhegi Kugadzira Machine
DRQ600-1000 Kupisa Kucheka Chikamu Chekuisa Chisimbiso Machine
SLD1300 Slitting Muchina
YTG600-1300 Flexo Yekudhinda Muchina
ZF350 Center Kuisa Mushini Machine
HZ300 Yekumhanyisa Center Simbiso Machine
QD350 Kucheka Muchina
LH500 Pepa Core Kucheka Muchina
YTZ600-1300 Flexo Kudhinda Muchina
ZUA400-600 Mativi Matatu ekuisa chisimbiso Bhegi Kugadzira Machine
GM1100-1900 Servo Kudzora Yekumhanyisa Sheet Cutt ...
dhonza tepi marara bhegi kugadzira muchina
Ruian Fangyong Machinery Fekitori inyanzvi yekugadzira mapurasitiki ekuputira michina senge marara bhegi kugadzira muchina, kudivi chisimbiso pasi chisimbiso bhegi kugadzira muchina, homwe bhegi kugadzira muchina, kumeso maski kugadzira muchina, gurovhosi kugadzira muchina, shangu yekuvhara muchina, shawa chivharo kugadzira muchina, kutsemura rewinding muchina, yekucheka muchina uye imwe hama michina.
Isu tiri muRuian, Wenzhou City, Zhejiang province inova 1 awa nhunzi kubva kuShanghai kana maawa maviri kubhururuka kubva kuGuangzhou.
Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina wei ...
Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina kugadzirwa, iyo yekucheka maitiro inofanirwa kutariswa kune uye haifanire kutorwa zvishoma. Naizvozvo, chinyorwa ichi chinosanganisa iyo yakadzvanywa inoumbwa neBOPP / LDPE inoumbwa firimu, matambudziko ehunhu anoitika mune yekucheka gadzira maitiro uye nematambudziko anoenderana emuchina wekucheka kuti uongorore. 1. Chengetedza yekumhanyisa kumhanya Paunopinda zvakajairika product ...
Paunenge uchishandisa iyo yekucheka muchina kugadzirwa, iyo yekucheka maitiro inofanirwa kutariswa kune uye haifanire kutorwa zvishoma. Naizvozvo, chinyorwa ichi chinosanganisa iyo yakadzoserwa yakasanganiswa BOPP / LDPE c ...
Kupisa kwekucheka kupisa tembiricha panguva b ...
Mukuita kwekugadzira bhegi, dzimwe nguva bhegi yekuisa chisimbiso haina kunyanya kunaka. Zvigadzirwa zvinogadzirwa nenzira iyi hazvina kukodzera. Chii chinokonzera chiitiko ichi? Tinofanira kuteerera kupisa aricheke te ...